Fianianana sy fametrahana ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo | Primature
Fianianana sy fametrahana ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo
1 juin 2018 8 juin 2018
Anosy, 01 Jona 2018 – Nanome voninahitra ny fotoam-pitsarana manetriketrika fianianana sy fametrahana amin’ny toerany ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice) izay natao tetsy amin’ny Fitsarana an-tampony Anosy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, niaraka tamin’ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta, notronin’ireo filoha-na Andrimpanjakana sy solontenan’ny mpiara-miombon’antoka, ary ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny avy.
Fanamafisana ny maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara ny fananganana ny Fitsarana Avo, izay hevitra niainga avy amin’ny Governemanta sy ireo mpanao lalàna na ny Parlemanta izany. Ka na mpitondra fanjakana na vahoaka dia samy hitovy zo eo ambany fanaraha-mason’ny Fitsarana mahaleotena. Antony nananganana ity rafi-pitsarana ity ihany koa ny famerenana indray ny fitokisan’ny vahoaka ny mpitondra satria aro fanina entina hitondrana fitarainana amin’izay zavatra tsy mety ataon’izy ireo. Voakasika amin’izany ny Filohan’ny Repoblika, ny Filohan’ny Antenimiera roa tonta, ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta, ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momban’ny Lalampanorenena. Noho izany dia mahefa hitsara ireo tompon’andraiki-panjakana am-perinasa ity Fitsarana Avo ity.
Mikasika ny fanapahan-kevitra navoakan’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana ny Praiminisitra taorian’ny lanonana, ny amin’ny fanoloana Praiminisitra dia nilaza fa : “olona demokraty ny tenako, manaja ny fifandimbiasam-pahefana, manaja ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra izay miompana amin’ny Lalampanorenana, manaja ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana ihany koa ary manaja ny soatoavina demokratika sy repoblikanina. Rehefa tonga ny fotoana, sahala amin’ny nataoko tamin’ny voalohany, am-pitiavana no nandraisako ny toerana maha-Praiminisitra ary maro ireo zavatra tsy maintsy nosedraina tamin’izany, dia am-pifaliana ihany koa no hanolorako ny fahefana amin’izay olona handimby araka ny Lalampanorenana… Ny irariana, ary manao antso avo aho, dia ny mba hiverenan’ny fitoniana eto Madagasikara, satria izay no ilain’ny vahoaka Malagasy rehetra. Tsy misy afa-tsy ny fitoniana sy ny firaisankina ihany no entintsika mampandroso an’i Madagasikara”.
← Fametrahana vato fehizoron’ny asa fanamboarana ny tsenabe ao amin’ny kaominina Ivato-Antananarivo
Visite de courtoisie des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante
Descente du Premier ministre à Toamasina